Fikononkononana asa ratsy :: Noraisim-potsiny ity lehilahy nikasa handroba orinasa • AoRaha
Fikononkononana asa ratsy Noraisim-potsiny ity lehilahy nikasa handroba orinasa
Nosamborin’ny polisy avy ao amin’ny hery vonjitaitran’ny Polisim-pirenena (Sag) ny lehilahy iray nihaodihaody teo amin’ny manodidinan’ny orinasa iray teny Mamory Ivato, afak’omaly. Nahitana basy poleta iray nisy bala fito teny aminy, hoy ny polisy. Fantatra fa nikasa hanafika an’io orinasa io ity lehilahy ity sy ny namany telo hafa.
Nahazo vaovao ny polisy, tamin’ny alakamisy lasa teo, fa misy olona vitsivitsy mikononkonona fanafihana mitam-piadiana. Orinasa iray ana teratany sinoa eny Mamory Ivato no nokendrena. Amin’ny alahady 16 febroary no saika hanatanterahana ny fanafihana.
Nanao vela-pandrika ny polisy nidina teny an-toerana, tamin’io alahady io. Tazana nandalo teo amin’ny manodidina ny lehilahy iray mampiahiahy ka nosamborina avy hatrany. Fantatra fa anisan’ireo olon-dratsy izy. Tsy hita teny kosa ny namany. Vola marobe ao anaty baoritra no nokasaina horobaina, araka ny nambarany tamin’ny mpanao famotorana. Eo am-pikarohana ny telo ambiny amin’ireo voalaza hanao fanafihana ny polisy.
Fifanenjehana teny Anosibe :: Roa lahy voasambotra, avy niafina tao anaty tsikafona
Fanafihana teny an-dalana :: Voatifitra teo am-pandosirana ilay gadra nentin’ny zandary